Kukosha kwekudyidzana kwehupenyu mumasango | Green Renewables
Iyo Isina Chinhu Sango Syndrome
Iyo "Empty Forest Syndrome" ndiyo inonzi masango ane vanhu vane yakaderera zvisina kujairika, hapana miti midiki, hapana mienzaniso yemamwe marudzi ehupenyu hwemhuka nemiti. Izvi zvinoitika nekuti imhando yekutsakatika asi yakanyarara.
Iwe unoda kuziva zvakawanda nezve "isina masango masango"?
1 Empty musango chirwere
2 Masango anotongwa
3 Shiri nebasa radzo
Empty musango chirwere
Iri zita rakapihwa nema biologist kune avo arboreal nzvimbo dzine mashoma miti midiki kana vashoma vanhu. Izvi zviri kunongedza kutsakatika kwemarudzi munzvimbo iyoyo. Munzvimbo idzi, iyo yechisikigo kutenderera iyo iyo mhando inomutsirazve yamira uye yadonha nekuda kwekusaenzana kwezvakatipoteredza uye kurasikirwa kwekudyidzana kunoita kuti zvipenyu zvirarame nekukura.
Kudyidzana pakati pezvinhu zvipenyu kunodiwa muzvinhu zvakasikwa kuchinjana kuyerera kunogara kwechinhu nesimba. Kutenda nekudyidzana uku, ecosystems anokura akatenderedza yakaenzana kuenzana. Kana masimba ekunze ari kunze kwesystem pachawo achikanganisa, chiyero chakaumbwa pakati pekudyidzana kwezvisikwa zvinoumba chinoputswa uye mashandiro anoita ecosystem anonyangarika.
Uku kudyidzana kunowanzo batsirana pakati pezvinhu zvipenyu uye zvinoumba izvo zvinonzi "mutualistic network" mune zvakasikwa. Kana aya maratidziro akaparadzwa nekushaikwa kana kuderera kwechimwe chezvinhu zvemambure, izvo zvinokonzeresa kufa kwakanyarara kweiyo ecosystem inozivikanwa se "isina chinhu musango chirwere."
Masango aya ane bharanzi rakatyorwa vakatongerwa kufa, sezvo vachida kudyidzana pakati pezvinhu zvipenyu. Masango ane zvirimwa asi pasina mhuka anoshurikidzwa kudzikira zvishoma nezvishoma uye kutsakatika munguva pfupi. Mhuka dzinozadzisa mabasa ezvakatipoteredza izvo miti inoda kurarama uye kubereka.
Izvi zvakasimbiswa nekuda kwemagwaro anoratidza kuti masango asina mhuka akarasikirwa kusvika kumatatu emakota ekoni yekuchengetedza kabhoni. Ndokunge, miti ichiripo, asi haizadzise yavo ecosystem mabasa. Iyo ecosystem sevhisi iri iyo iyo iyo zvisikwa inotipa isu neyakareruka chokwadi chekuramba tiri muchiyero uye kuwirirana. Semuenzaniso, iyo CO2 inotora mashandiro emiti isecosystem service.
Pasi rese hapana mhando inogona kugara yega isina hukama nemamwe marudzi. Kunyangwe mhando dzadzo dziri dzega, dzinoda dzimwe mhando kuti dzidye kana dzive nepekugara. Zvese zviri mumasisitimu uye chikara-chinokambaira kana chisvetasimba-chinogamuchira kana mutualism, etc. Ivo vanoda hukama pakati pezvisikwa zvipenyu zvakasiyana.
Aya ndiwo marongedzero akaitwa hunyanzvi hwezvinhu zvipenyu. Hapana chiripo chisina kana chirevo, zvese zvine chikonzero chekuve. Naizvozvo, zvakakosha kuti utarise hukama huri pakati pezvinhu zvipenyu kutaura nezvekutsakatika kwezvisikwa.
Kune mamwe ecosystem ayo anokwanisa kuenderera zvirinani zvirinani kunyangwe mamwe marudzi akarasika. Asi ichokwadi kuti kune marudzi ane huvepo yakakosha pakushanda kwakafanana uye kuti, pasina ivo, inodonha zvachose.
Shiri nebasa radzo
Mazhinji eshiri dzinodya zvipuka uye rimwewo boka rinodya zvinhu, idzo dzinodya michero ine nyama, maruva, nekita, mukume kana tubers, uye zvine basa rekuparadzira mbeu kuburikidza netsvina yadzo kana kudzokedzana. Ichi chiito chinovaita vakakosha muzvinhu zvipenyu kuitira kuti zvirimwa zvipararire kuburikidza nenzvimbo.
Pasina shiri, zvisikwa zvipenyu zvaigona kuparara zvachose, sezvo kugona kwayo kwekuzvarwa patsva kwaizokanganiswa zvakanyanya. Chero chinhu chinopindira mukurasikirwa kwehupenyu hwehupenyu kunoisa bhalanzi panjodzi. Semuenzaniso, mapere ari muSierra Morena, asi haana basa rezvakatipoteredza mune zvakasikwa.
Mhando dzinopenga dzinoda mitsara mikuru dzinozokanganiswa kana sango rikatsemuka. Kana huwandu hwenzvimbo kana huwandu hweshiri dzinodya husinga dzikire zvakanyanya, nzira yekupararira kwemuti inodonha, michero yakaibva yaomeswa mairi kana kudyiwa nemakonzo, zvinomera zvinouraya mbeu uye hapana inzira inoshanda yekuparadzira mbeu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Environment » Iyo Isina Chinhu Sango Syndrome
Chii chinonzi nyukliya fission
Iko kushanda kwe Windmill